Thiago Silva oo shaaca ka qaaday hubkooda ugu weyn ay kaga hortagi doonaan kulanka Liverpool – Gool FM
(Champ’ League) 26 Nof 2018. Kabtanka kooxda ‎Paris Saint-Germain ee Thiago Silva ayaa xaqiijiyay in ay muhiim tahay inay guul ka gaaraan kooxda reer England ee Liverpool, kulanka ay habeenka Arbacada ku wada ciyaarayaan tartanka Champions League.
Paris Saint-Germain ayaa Group C ay kaga jirto tartanka Champions League booska 3-aad, waxaana jira farqi hal dhibic ah ay u jirto kooxda Liverpool, kahor inta aan la baasan kulanka habeenka Arbacada.
Hadaba Thiago Silva ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Le10sport” ee dalka France wuxuu kaga hadlay muhiimada kulanka ay Arbacada la qaadan doonaan kooxda Liverpool.
“Waxaan u shaqeenay si aan u gaarno guul kulamada horyaalka, kadib 14 kulan aan soo guuleesanay”.
“Kooxaha Liverpool iyo Napoli waa kuwo aad u fiican, lakiin waa inaan ku guuleysanaa gurigeena, si wacan ayaan u ciyaareynaa kulankan, si wanaagsana waan ugu diyaar garoobeynaa”.
“Barbaro ama guul daro waxay la macno tahay inay soo idlaato waayaheena tartanka Champions League ee xili ciyaareedkan, waa inaan ku ciyaarnaa si maskaxeysan, isla markaana aanan iska luminin xakameynta ciyaarta, dadaalna aan muujino ilaa iyo dhamaadka ciyaarta, sababtoo ah waxaan heysanaa 90 daqiiqo aan goolal ku dhalin karno”.
BAL EEG FARQIGA: N’Golo Kante SHALAY iyo MAANTA.....(Sarri oo Jorginho dartiis u Dilaya Tayada Kante)